Isisombululo sesibhedlele inkqubo yolawulo oluphambili lwesibhedlele
Okwangoku, iikhemesti ezininzi kunye neewadi azikhathali ngokwaneleyo kulawulo lwamayeza. Amayeza awahlelwa kwaye agcinwa angenakufumana lowo ubabhataleleyo; Abaphathi abaphambili bendawo yokugcina amayeza bavula ucango ngokuthanda kwabo ...Funda ngokugqithisileyo »
Umzekelo oqhelekileyo wesicelo seKhabhinethi yoLawulo oluPhambili
Ityala eliqhelekileyo lesicelo seKhabhinethi eNkulu yoLawulo oluPhezulu -—Jin Bei Group Co, Ltd. KwiCambodia Ulwazi Jikelele lweNkampani Igama: Jinbei Group Co., Ltd. Idilesi: kwiPhondo laseSihanouk, ...Funda ngokugqithisileyo »
Izisombululo zeZithuthi-Icandelo lezemfundo
Ziyanda kwaye iiyunivesithi kunye namaziko emfundo kufuneka abonelele ngeenkonzo ezinokuhlawuleka kunye nezonga imali kubasebenzi nakubafundi. Iiyunivesithi kunye namaziko emfundo Imibutho yezempilo kumaziko emfundo iphantsi koxinzelelo rhoqo njengoko ...Funda ngokugqithisileyo »
Izisombululo zehotele ephezulu
Ubhubhane wecorona kulo nyaka uzise ifuthe elikhulu kukhenketho lwehlabathi nakwimizi-mveliso yemiboniso, ngakumbi ishishini lehotele.Abaphathi behotele bajongene nemiba yezokhuseleko, indlela yokuphucula ukusebenza kakuhle kwehotele kwaye kwangaxeshanye banyanzelise ikhomishini. ...Funda ngokugqithisileyo »
Izisombululo ze-Ofisi yamashishini amancinci naphakathi
Ishishini okanye inkampani ihlala inamasebe amashishini amaninzi, anje ngeSebe lezoLawulo, iSebe lezeMali, iSebe lokuSebenza kunye neSondlo, iLogistics Fleet kunye neSebe lezoKhuseleko. Kukwakho namagumbi amaninzi eofisi anjengeOfisi, Igumbi leNtlanganiso, iRecep ...Funda ngokugqithisileyo »
IKhabinethi ephambili etshixwayo, Inkqubo yoLawulo lwebhokisi encinci kunye nesitshixo, Ibhokisi ephambili ejingayo, IKhabhinethi eKhulu yokuGcina, Ibhokisi yoKhiye woLawulo, IKhabhinethi Yolawulo Oluphambili,